Chinongedzo Chakakwana cheZvese Akanakisa Masora Anokuya Kuti Utenge Muna 2021.
Chigadzirwa chinoshandiswa kukuya sora rinopwanya maruva e cannabis kuita zvidimbu zvidiki zvemajoini, blunt, uye ndiro. Isa nug iri pakati pemeno eiyo grinder yeuswa, wobva wamonyesa kumusoro uye pasi peguyo nenzira dzakasiyana kuti uputse ruva. Mishonga yekukuya inogona kusanganisira kief ca ...
Chii chinonzi Grinder uye Unoishandisa Sei kuCannabis?
Girafu rakazadzwa nemaguru (Leafly) Kana iwe uri mutsva kune cannabis, unogona kunge uine mibvunzo mishoma nezve ma grinders uye maitiro ekuishandisa imwe. Vanokuya vanogona kutengwa panenge chero chitoro chehutsi kana shopu yemusoro, kana iwe unogona kuraira imwe online kubva kunzvimbo dzakasiyana siyana dzekutengesa. Ivo vanogona kuve vakareruka sekugaya kadhi (l ...
Grinder Zvidimbu uye Pollen Catcher
Anokuya ane zvidimbu zvakawandisa kazhinji ane kamuri akapatsanurwa ine nhete yesimbi mambure iyo inobata chete mudiki kwazvo mukume. Iyi pollen inowanzo kuve ine simba, uye vanoputa vanowanzo kuunganidza iyo yekuvaka kuti vasase pamusoro peyavo yakajairwa mbiya yemakwenzi akaoma. Chidimbu chinokuya chinogona kuva chero ...
Nei Uchishandisa Girafu?
Makwenzi ekukuya ndiwo anokosha maturu eanowanzo svuta maruva. Kunyangwe iwe uri kumonera, kurongedza mbiya mune yako yaunofarira bong kana kurongedza kumusoro muhomwe chipunu, kusagadzikana kukuya kunokosha kune yakanakisa utsi. Vanogaya zvakare vanogonesa vanosvuta kuti vawane zvakazara kubva p ...
3 Zvikonzero Zvikuru Zvekushandisa Herb Grinder kuti Usimudze Yako Buds
ZVAKANAKO ZVINOBATSIRA ZVINOTANGA NEZVINONAKA KUSVIRA SESE Sora Around pano, tinoda kutaura kuti "Chikamu chega chega chinofanira kutanga ne SLX" uye ichokwadi ichocho! Kunyangwe iwe uchifarira kunakirwa nemiriwo yako mubhengi kana kubhowa, pombi kana bepa, uye kunyanya kana ukasarudza kushandisa mushonga wemushonga, iko kushandiswa kwakakodzera o ...